Hitachi HDTV ကင်မရာများသည် Willow Creek လူထုဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်အွန်လိုင်းကိုးကွယ်မှုအတွေ့အကြုံများကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Hitachi HDTV ကင်မရာများကို Willow Creek အဘိဓါန်အဝန်းဘုရားကျောင်းများအတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်အွန်လိုင်းကိုးကွယ်မှုအတွေ့အကြုံများ Enhance
Hitachi HDTV ကင်မရာများကို Willow Creek အဘိဓါန်အဝန်းဘုရားကျောင်းများအတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်အွန်လိုင်းကိုးကွယ်မှုအတွေ့အကြုံများ Enhance
အသုံးပြုမှုအကူအညီနဲ့၏ပုံရိပ်ကိုအရည်အသွေး, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူခြင်းတကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြု megachurch က၎င်း၏နောက်လိုက်များနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာချိတ်ဆက်
Woodbury, နယူးယော့, မတ်လ 1, 2017 - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကြီးဆုံးအသင်းတော်များ၏တဦးတည်းအဖြစ်, Willow Creek အဘိဓါန်အဝန်းဘုရားကျောင်းက၎င်း၏ကျောင်းခွဲများအတွင်းနှင့်ကျော်လွန်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်း၏အသင်းတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကဗီဒီယို၏တနျခိုးအပေါ်အလွန်မြင့်တန်ဖိုးကိုနေရာ။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းတောင်ပိုင်း Barrington, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်၎င်း၏အဓိကနေရာတွင်အမြင့်ဆုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရန်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်သောအခါ, အရာသည်၎င်း၏ကိုးကှယျမှုန်ဆောင်မှုသူဌေး, စွဲငြိဖွယ်ရာအမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံများကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန် Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ Ltd (Hitachi Kokusai) မှ HDTV ကင်မရာများမရွေး ကမ္ဘာတဝှမ်းလူသိများကြသည်။
တစ်ဦးက Non-ဂိုဏ်းနှင့် Multi-မျိုးဆက်ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန် megachurch, Willow Creek အဘိဓါန်ယင်း၏အကြီးတန်းသင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်ဘုရားကျောင်းဦးဆောင်လမ်းပြဆက်လက်သူကိုဘီလ် Hybels က 1975 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ထက်ပိုမို 25,000 လူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီတနင်္ဂနွေ Willow Creek အဘိဓါန်၏အဓိကကျောင်းဝင်းမှာကိုးကှယျမှုန်ဆောင်မှုများတက်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်ခုနစ်ခုနောက်ထပ်ဒေသဆိုင်ရာနေရာများထဲကတစ်ခု။
မိုးမခ Creek အဘိဓါန်ယင်း၏စတငျခဲ့ HD လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ဖန်တီးမှုနှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပစ္စည်းကိရိယာများ 10 နှင့် 15 နှစ်အကြားအသက်နှင့်၎င်း၏ဘဝသံသရာ၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိ" Darren Niesley, Willow Creek အဘိဓါန်ဗီဒီယိုဒါရိုက်တာတစ်ဦးကရှင်းပြသည်။ "တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ရောက်တစ်ခုပင်ပိုကောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမီဒီယာအတွေ့အကြုံကိုပေးချင်တယ်။ "
မိုးမခ Creek အဘိဓါန်နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်၎င်း၏ 40th နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားဖြစ်ရပ်အပါအဝင်မိုးမခ Creek အဘိဓါန်စီမံကိန်းများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခဲ့သောမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအထူးကု TNDV နဲ့ဘုရားကျောင်းရဲ့အလုပ်ကနေ Hitachi ကင်မရာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ System Integration Clark ကအဆိုပါများအတွက် Hitachi ကင်မရာများအကြံပြုသည့်အခါသူတို့အဘဏ်ဍာများ၏အရည်အသွေးမြင့်ရလဒ်များကိုကျေနပ်သည်ဘုရားကျောင်းအလွန်အဆင်ပြေခဲ့ HD upgrade ။ Clark ကနှင့် Hitachi Kokusai ဖြန့်ကျက်နေစဉ်အတွင်းအတူတကွနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "Hitachi Kokusai တစ်ခုလုံးကို Willow Creek အဘိဓါန်အဝန်းဘုရားကျောင်းစီမံကိန်းကိုတစ်လျှောက်လုံးကိုကြီးစွာသောမိတ်ဖက်ခဲ့," ဂျော့ခ်ျ Clark က, အပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီတခု၏တည်ထောင်သူကဆိုသည်။
ရှစ် Hitachi SK ကို-HD1200 ခရီးဆောင် HD စတူဒီယိုနှင့်ကွင်းဆင်းထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများပေါင်းနှစ်ခု Hitachi DK-H100 ကျစ်လစ်သိပ်သည်း box ကိုကင်မရာများယခု Willow Creek အဘိဓါန်ရဲ့အ 7200-ထိုင်ခုံအဓိကခနျးမတှငျအသုံးပြုကြသည်။ နှစ်ဦးက SK ကို-HD1200s တစ် jib တခုတခုအပေါ်မှာနောက်ထပ် SK ကို-HD55 အတူ Fujinon 1200x မျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူရှေ့-of အိမ်သူအိမ်သားနောက်ကွယ်မှ tripod အပေါ်တပ်စွဲနေကြသည်။ ငါးကပိုထိုကဲ့သို့သောကင်မရာများတစ်ခုချင်းစီကိုတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်ရဲ့အထူးသဖြင့်လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်. ပြင်သာပြောင်းသာတပ်ဖြန့်နေကြသည်။ "ဒီကင်မရာများ '' လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဘက်စုံသုံးခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Niesley ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကလက်ကိုင်ကနေရှေ့တန်းန်းကျင်ကိုလှိမ့ဘီးအပေါ်အပြည့်အဝစတူဒီယိုပစ္စည်းများသို့မဟုတ် tripod ရန်, ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေနဲ့သူတို့ကို configure နှင့် 22x telephoto မှတက်စံ 40x ကနေအထိမျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူနိုင်တယ်။ "
ဒုတိယတစ်ဦးအတွက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် DK-H100 box ကိုကင်မရာတစ်ယောက်သော Steadicam တည်ငြိမ်စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုသည် Ross ကဗီဒီယို သူ့ဟာသူနေတဲ့ TCP / IP ကွန်ယက်ကျော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စက်ရုပ်နှင့်ကင်မရာကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ CamBot 500 ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ။ "ဒီ DK-H100 ကင်မရာများသည်ဤအသုံးပြုမှုများအတွက်စုံလင်သောင်တဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောပုံစံအချက်ထဲမှာ SK ကို-HD1200s, ကဲ့သို့တူညီသောအကြီးအပုံရိပ်အရည်အသွေးသည်," Niesley ရှင်းပြသည်။
တစ်ဦးမှတဆင့် switched Ross ကဗီဒီယို တွေလိုပဲထုတ်လုပ်မှုစနစ်, Hitachi ကင်မရာများအားဖြင့်ဖမ်းမိသောဗီဒီယို 24-ခြေလျင်မစ်ဆူဘီရှီအားဖြင့်ခနျးရဲ့အနှစျခု 14-ခြေလျင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပုံရိပ်ကိုချဲ့ (Image) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်နှစ်ယောက်ထက်ပိုမှဖန်သားပြင်နှင့်အလားတူအရွယ်, Barco-မောင်းနှင် projection မျက်နှာပြင်အဖြစ်ဖြန့်ဖြူး LED ကိုးကွယ်မှုရေးစင်တာနှင့်၎င်း၏လော်ဘီတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဒါဇင် 55 "မော်နီတာ။ "ကြောင့်ခနျး၏အရွယ်အစား၏, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ရောက် image ဘို့, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသူတို့ရှုထောငျ့မှမမြင်နိုင်နောက်ထပ်အခြေအနေတွင်ပေးသည်တစ်ခုထုတ်လွှင့်ပုံစံအတွေ့အကြုံမရင့်ဖန်သားပြင်မှရှာဖွေနေပါတယ်" ဟု Niesley ကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သူတို့အထဲမှာသို့မဟုတ်အခန်းထဲကနေဖြစ်စေ, ကြည့်ရှုကို 'တပြင်လုံးကိုရုပ်ပုံ' 'ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "
ဒါက Out-of-နေရာလက်လှမ်းမမီအချိန်-နှောင့်နှေးအခြေခံပေါ်မှာဖေါ်ပြခြင်းများအတွက်အဓိကကျောင်းဝင်းန်ဆောင်မှုများ၏မီဒီယာဖိုင်ခံယူသော Willow Creek အဘိဓါန်ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားက်ဘ်ဆိုက်များမှချဲ့ထွင်ခြင်း, အသက်ရှင်ရန်နှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှနောက်လိုက်များကရှုမြင်ကြသည်ကြောင်း On-demand စီး။ မိုးမခ Creek အဘိဓါန်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ရပ်ကိုလည်းပုဂ္ဂလိကမြောက်အမေရိကတစ်လွှားနေရာများရာပေါင်းများစွာမှထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖြန့်ဖြူးဘို့ထုပ်ပိုးထားသည်။
အဆိုပါ Hitachi ကင်မရာများနှင့်အတူ Niesley ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုအမြင်အာရုံအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှစ်ဦးစလုံးအထိချဲ့ကာ။ "ညာဘက် box ကိုထဲကကင်မရာကယ့်ကိုအကောင်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်ကိုက်ညီရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်" ဟုသူကမျှဝေပေးတယ်။ "ထိုသူတို့ပုံရိပ်ကိုအပေါငျးတို့သရှုထောငျ့က, ru-1500JY အဝေးထိန်းယူနစ်ငါတို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းသောစေမြင်ကွင်းတစ်ခုဖိုင်တွေအကြား switching ၏လွယ်ကူခြင်းအပေါ်ခလုတ်များ၏ programmer ၏နက်ရှိုင်းသော, ခေတ်မီထိန်းချုပ်မှုပူဇော်နေစဉ်။
"ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြောင်းအရွေ့ HD အဆိုပါ Hitachi ကင်မရာများထက်ပိုချောမွေ့စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကိုးကှယျမှုအတှေ့အကွုံသို့ဗီဒီယိုကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူ "Niesley အကျဉ်းချုံး။ "ဒီပုံရိပ်အရည်အသွေးဒါမြင့်မားသည်နှင့်, ကင်မရာများကလူပဲအဘယ်သူမျှမအာရုံပြံ့လှငျ့အတူ program ကိုခံစားနိုင်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်။ "
Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc ကို (Tse: 6756) တိုကျို, ဂျပန်, ဌာနချုပ်, အသံလွှင့်စနစ်များ, လုံခြုံရေးနှင့်စောင့်ကြည့်စနစ်များ, ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုနှင့်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာကုန်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ (မတ်လ 2015, 31 အဆုံးသတ်) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2016 အသားတင်ရောင်းချမှု 180,740 သန်းယန်း ($ 1,604million) စုစုပေါင်းစုစည်း။ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.hitachi-kokusai.co.jp/global/en/index.html.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-03-01
ယခင်: Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှု, LLC, NAB 2017 မှာဟန်ပြ arrowFX
နောက်တစ်ခု: SMPTE SMPTE 2017 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲများအတွက်သတင်းစာများကများအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှစ်